कागले कान लग्यो, मन्त्रीले मन लगे | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
कागले कान लग्यो, मन्त्रीले मन लगे
साउन १२, २०७५ शनिबार ७:५८:८ | मिलन तिमिल्सिना
बालुवाटारमा मार्सी भातको बास्ना, सडकमा त्यही मार्सीको गन्ध । मार्सी धान फल्ने ठाउँ जुम्लादेखि भात नपचेर उपचार हुने ठाउँ काठमाडौंको शिक्षण अस्पतालसम्म अनसन र विरोधको खैलाबैला ।
केही काम नपाएर बेरोजगारजस्तै बनेर बसेको विपक्षीलाई के निहुँ पाउँ भैरहेका बेला मन्त्रीले गरम मसला दिए । त्यसपछि मार्सी भातकोभन्दा मन्त्रीको मसलाको गन्ध फैलियो ।
हातमा इँटा बोकेर बानेश्वरमा हिँडिरहेको एक युवाको नाकमा पनि गन्ध पुग्यो । ‘ओइ तिमीहरुले सुन्यौ मन्त्रीले के बोलेछ ?’ हातमा इँटा बोकेका उनले साथीलाई सुनाए ।
‘कसले के बोल्यो र ?’ मन्त्रीको गाडीमा ढुंगा हान्न ठिक्क परेको अर्को बोल्यो ।
‘बंगलादेशमा डाक्टर पढ्न जाने हाम्रा चेलीहरुलाई मनपरी भनेछन्’, इँटावालाले भने ।
‘डाक्टर पढ्न जाने चेलीसँग तिनको के रीस ? मन्त्रीजस्तो मान्छेले त त्यसरी भन्न नपर्ने ! के भने र ?’ ढुंगावालाले अलि जान्न खोज्यो ।
‘बंगलादेशमा डाक्टर पढ्न जाने चेलीले शरीर नबेचेसम्म सर्टिफिकेट पाउन सक्दैनन् भनेछन् । मन्त्रीले यस्तो मनपरी बोल्न पाउँछन् ? यिनलाई छाड्न हुन्न’, इँटावाला उफ्रिए ।
ढुंगावालालाई पनि त्यही ढुंगाले कसैको सिसा फुटाउँजस्तो गरी रीसको पारो तात्यो ।
मन्त्रीले यस्तो बोले रे भन्ने खबर महिला अधिकारकर्मीहरुसम्म पनि पुग्यो । लौ कागले कान लग्यो रे भन्दै सबै कान नछामी कागको पछि कुद्न थाले ।
‘मार्सी भात खाएर आफ्नै छोरीचेलीलाई जे पायो त्यही भन्ने मन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’
‘राजीनामा मात्रै होइन, मन्त्रीलाई जेल हाल्नुपर्छ ।’
फेसबुक र ट्विटरभरी मन्त्री छाए । मार्सी भात, मार्सी भात खुवाउने ठेकेदार, त्यही भात खाने नेता, भात नखाएर अनसन बस्ने डाक्टर, डाक्टर पढ्ने विद्यार्थी सबैसँग मन्त्रीलाई घोलघाल पारेर मिसाइयो । मार्सी फिका भयो, मन्त्री गाढा भए ।
सडक र फेसबुकको भित्ता हुँदै कागले कान लगेको चर्चा सुरक्षा घेरा तोडेर बालुवाटार र धुम्बाराहीसम्म पुग्यो ।
‘ए यस्तो पो बोलेछन् यिनले ? यसले त हाम्रै पनि इज्जत जाने भयो त’ नेकपाका तल्ला तहका कार्यकर्ता मसिनो स्वरमा बोले ।
‘विपक्षी शेरबहादुर हुन् कि हाम्रै शेरबहादुर हुन् यिनी ? यस्तो त बोल्न नहुने, नपर्ने ? हामीलाई नै पो अप्ठ्यारो पारे’ नेकपाको अलि उच्च तहका दुई नेताले शीर्ष नेताको कानमा पर्ने गरी खासखुस गरे ।
‘ल अब राजीनामा दिन लगाउनुपर्छ, यसरी त हुँदैन’ नेकपाभित्रको पनि विपक्षी खेमाका नेताले कुरा उठाए ।
‘हो हो त्यसै गरौं’। उनीसँगै रहेका अर्का शीर्ष उफ्रिए ।
आफ्नै घरभित्रका विपक्षीको कुरा काट्ने आँट सबैभन्दा माथिका शीर्षको पनि भएन । दुई शीर्षले मुखामुख गरे । दुवैजना गम्भीर भए । त्यसपछि शीर्षका पनि शीर्षले मन्त्रीलाई हेर्दै भने ‘ल मन्त्रीजी, राजीनामा दिनुहोस् !’
‘मैले त के नै भनेको छु र ? सरकारको बचाउ गरेको मात्र हो । अस्ति मात्र तपाईँले सरकारको पक्षमा बोल्ने कोही भएनन् भन्या हैन र ? त्यही भएर म अघि सरेको । त्यहाँमाथि मैले माफी पनि मागिसकेको छु’ मिलाएर बोल्न नजान्ने पीडित मन्त्रीले फेरि हात जोडे ।
‘कहाँ माफी मागेर मात्र हुन्छ ? हामीलाई अप्ठ्यारो परिसक्यो’, पहिले नबोलेका शीर्षले भने ।
‘हजुर के नै बोल्या हो र ? हजुरहरुले भाषणमा योभन्दा धेरै बोल्नुहुन्छ । मैले त सुनेको कुरा यस्तो छ मात्रै भन्या त हो नि’ उनले स्वरमा अतिरिक्त नम्रता थपेर भने ।
‘ल अब धेरै कुरा नगरौं, राजीनामा दिउँ’ शीर्षका शीर्ष पहिले बोलेको आफ्नो चट्टानी अडानबाट डेग चलेनन् ।
केही जोड नचलेपछि मन्त्रीले राजीनामा दिए । धुरुधुरु रोए । उनको रुवाई र भनाईले सबैलाई भावुक बनायो । अघिसम्म गाली गर्नेहरुले अब प्रशंसा गर्न थाले ।
त्यसपछि उनले के चाहिँ भनेका थिए र यस्तो भयो भनेर उनको भाषण केलाउन थाले ।
खोज्दैबुझ्दै जाँदा उनको भाषण यस्तो रहेछ :
‘‍‍...युएस बांगला एयर दुर्घटनामा हुँदा २१ जना डाक्टरहरू यही हाम्रो विमानस्थलमा बिते, कति मार्मिक छ कुरा । आज म कथा खोल्छु, बंगलादेशमा कयौं चेलीहरू हाम्रा छोरीहरू डाक्टर पढ्न जानुहुछ भने डाक्टरको सर्टिफिकेट लिनका लागि मैले सुनेको छु– उसले कहीँ न कहीँ आफूलाई बेच्नै पर्छ । मैले सुनेको छु यति मार्मिक छ कथा । उनीहरुले खोलेका छन् कथा । हामी हाम्रा छोरीलाई विदेश पढ्न पठाउँछौ, तर उसले आफूलाई नसुम्पिकन सर्टिफिकेट प्राप्त गरिरहेको अवस्था छैन । त्यसैले सबैले यो मुलुकमा एमबीबीएस पढ्न पाउनुपर्छ भन्दा हामी प्लेकार्ड बोकेर निस्कन्छौँ, पाइँदैन, हुँदैन भनेर ।’
मन्त्री सिंहदरबारबाट रुँदै हिँडेपछि बल्ल उनको भाषण पढ्ने र बुझ्ने मौका मिलेजस्तो भयो ।
‘पूरा भाषण हेर्दा त खासै आपत्तिजनक होइन रहेछ त’ अघिसम्म विरोध गर्नेले भाषणको सप्रसंग व्याख्या गर्यो, ‘यस प्रसंगमा न उनको इतिहास हेरियो । न अभिव्यक्तिको आशय । न त शब्द केलाउने प्रयास नै भयो । कुरा बुझ्दा उनीमाथि अन्याय भयो । गुटबन्दीको सिकार भए । तैपनि उनले दम्भ पालेर बसेनन् । अरुले जस्तो हठ गरेनन् । पहिले माफी मागेका थिए । पछि राजीनामा नै दिए । मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए पनि यिनको सांसद पद छँदैछ । आफूले उठाएका कुराको समाधान खोजून् ।’
त्यसपछि राजीनामा माग्नेहरुलाई लाग्यो, ‘मान्छे त राम्रै रहेछन् । चेलिबेटी बेचबिखनविरुद्ध पनि अभियान चलाएका रहेछन् । घरमा श्रीमतीलाई पनि तपाईं भन्छन् रे । छोरीचेलीको इज्जत पनि गर्छन् रे ।’
‘उनको योगदान र भाषणको अर्थ त राजीनामा अघि नै खोजेर प्रष्ट पार्न सकेको भए पो’ एउटाले पछुतो गरेझैँ गर्‍याे ।
‘जे हुनु भैसक्यो, उनले यस्तो सुनेको छु भनेर भाषण गरे । हामीले मन्त्रीले यसो भने रे भन्ने सुनेको आधारमा विरोध गर्यौं, दुवैतिर बराबर’ अर्कोले चित्त बुझाउन खोज्यो ।
July 28, 2018, 8:19 p.m.
समाचार सारै गज्जबको लाग्यो । कुरा नबुझी हचुवाको भरमा दगुर्ने हामि नेपाली अनि काहा बाट निहु पाउ कनिका बुक्काउ भनेर दाउ हेरेर बसेको नेपाली कङ्ग्रेसले यी समाचार बाट केही सन्देश लिने कि ?
सही हो, हाम्रो देश नै यस्तै हो /
Bahunbadi sasan byabastha ma aaru jaati Kai pratinidhi ta Bali ko Boko banne sarba manya sidhant ma aaschrya manne thaou chha ra? Prasai Lai karbahi garne aant bhako chhaina ta......?